डिभोर्सपछि मस्तसँग एक्लै जीवन हाँकिरहेका नेपाली सुन्दरी ! – Kavrepati
Home / मनोरंजन / डिभोर्सपछि मस्तसँग एक्लै जीवन हाँकिरहेका नेपाली सुन्दरी !
admin September 2, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 120 Views
– रेखा थापानेपाली सिने क्षेत्रमा हिम्मतवाली नायिकाका रुपमा परिचित छिन् रेखा थापा । फिल्मभित्र नायकलाई ओझेल पार्दै उनी नै नायकका रुपमा उभिन्छिन् । निर्देशक छवि ओजासंग विवाह गरेकी थापाको वैवाहिक सम्बन्ध लामो समयसम्म टिक्न सकेन् । एक दशक लामो वैवाहिक सम्बन्धलाई ब्रेक लगाएकी रेखा हाल एक्लै बस्दै आएकी छिन् ।
– मनिषा कोइरालामनिषा केहि समयसम्म बलिउडमा नम्बर १ नायिकाको स्थान हासिल गरेकी नायिका हुन् । नेपाली फिल्म फेरि भेटउँलाबाट डेब्यु गरेपनि बलिउडमा भने उनले टप ब्यानरको सौदागरबाट झुल्किने मौका पाइन र उनी त्यहि फिल्मबाट नै रातारात स्टार बनिन् । उनै मनिषाले सम्राट दाहालसंग विवाह गरेकी थिइन् । तर यो विवाह छोटो समयमा नै पूर्णविराम लाग्न पुग्यो ।
– रिमा विश्वकर्मानायिका तथा मोडल रिमा विश्वकर्माले रोबर्ट बिकसंग विवाह गरेकी थिइन् । विवाह गरेको २ वर्ष नपुग्दै नै उनीहरुले आफ्नो सम्बन्धलाई पूर्णविराम लगाइदिएका थिए । नेपाल आइडलको होस्ट बनेपछि लोकप्रियता अझ तुल्याउन सफल रिमा प्रस्ट वक्ता र सुन्दरताका कारण चर्चामा रहन्छिन् । रिमाले अर्को विवाहको बारेमा केहि सोचिनसकेको बताउने गरेकी छिन् । उनले हाल कमेडी च्यम्पियनमा होस्ट गरिरहेकी छन् ।
गौरी मल्लगौरी मल्लले चलचित्र सन्तानबाट डेब्यु गरेकी हुन् । अब्बल अभिनयका कारण उनी नेपाली सिने बजारमा सदाबहार छिन् । करियरकै उचाइमा रहेका बेला उनले प्रज्वल भण्डारीसंग विवाह गरेकी थिइन् । प्रज्वलसंग वैवाहिक सम्बन्ध नटिकेपछि अन्तत उनीहरु अलग्गिए । गौरीले अर्को विवाह नगरी एक्लै बस्दै आएकी छिन् ।
– चुल्ठिम डोल्माचलचित्र नोभेम्बर रेन बाट चर्चामा आएकी चुल्ठिमले गाएक धिरज राईसंग विवाह गरेकी थिइन् । चुल्ठिमको बैवाहिक सम्बन्धपनि लामो समयसम्म अघि बढेन् । उनीहरु के कारणले अलग भए भन्नेकुरा खुलाइएको छैन् ।
– मौसमी मल्लमौसमी कुनै समयकी चर्चित नायिका हुन् । उनले १५ वर्ष कै उमेरमा धन विक्रम मल्लसंग विवाह गरेकी थिइन् । विवाह भएको ९ वर्षपछि मौसमीले डिभोर्स गरेकी हुन् । आफ्नो ध्वस्त वैवाहिक जीवन सम्झेर पुन विवाह गर्नेबारे कल्पनासम्म पनि नगरेको उनले बताउने गरेकी छिन् ।
– अरुणिमा लम्सालएक समयकी चर्चित नायिका अरुणिमा लम्सालको पनि वैवाहिक सम्बन्ध टिक्न सकेन् । अमित अर्यालसंग विवाह गरेकी उनले १२ वर्षको वैवाहिक सम्बन्धलाई टुङ्ग्याएकी थिइन् । उनले अभिमन्यु,आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ, अग्नि ज्वाला, बुवाआमा, मेरो प्यारो माइतिघर, रामबलराम लगायतका २ दर्जन चलचित्रमा अभिनय गरेकी छिन् । पछिल्लो समय चलचित्र क्षेत्रमा नदेखिएपछि उनको चर्चा भने भइरहने गर्छ ।
– मिलन अमात्यमिलन अमात्य नयाँ पुस्तामा परिचित गायिका हुन् । अहिलेसम्म उनले दर्जनौ गीतमा स्वर दिएकी छिन् । सफल गायिका अमात्यको वैवाहिक जीवन भने सफल हुन् सकेन् । विवाह भएको ६ वर्षमा मिलनको डिभोर्स भयो ।
Previous अर्कैकी श्रीमतीसंगको गो’प्य भिडियो बाहिरिएपछी कर्णालीका मन्त्रि शाहीले दिए यस्तो जवाफ-
Next आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अवधिमा तनहुँमा सवारी दुर्घटनाबाट परी ३७ पुरुष र आठ महिलासहित तीन बालकको मृत्यु